नारीको जिन्दगी मुहानको जल..,नदीको पानी हो : हिमानी शाह – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Uncategorized/नारीको जिन्दगी मुहानको जल..,नदीको पानी हो : हिमानी शाह
नारीको जिन्दगी मुहानको जल..,नदीको पानी हो : हिमानी शाह
पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लेखेको पुस्तक “‘सन्देश सङ्ग्रह”’सार्वजनिक गर्नु भएको छ।पुस्तक सार्वजनिक गर्दै हिमानीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह को सन्देश पढेर सुनाएकी थिइन्। हिमानी ट्रष्टले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालै प्रकाशित पुस्तक बिक्री गरेर “दैवी प्रकोप उद्धार कोष” मा रकम संकलन गर्ने घोषणा गरेको छ।हिमानी ट्रष्टले सामाजिक काम हरु गर्दै आएको छ। पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकम सामाजिक कार्यमा खर्च हुने ट्रष्टकी अध्यक्ष हिमानी शाहले बताउनुभयो।
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म १ अक्टोबर, १९७६ मा भारतको राजस्थान सि’करमा भएको हो। हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहको कोखबाट जन्नम लिएकी हुन्।हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे भएको थियो। उनले छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई जन्न दिएकी हुन्। उनले प्राकृतिक वि’पत्तिमा परेकालाई सहयोग गर्न दैवी प्रकोप उ’द्धार कोष’ स्थापना गरेकी छिन्। ट्रष्टकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनि ४४ वर्ष लाग्दा पनि उतिकै सुन्दर देखिएकी छिन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चामा आएका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफू राजा हुने आशक्तिको मानिस नभएको बताएका छन्। पूर्व युवराज पारसले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको बताए। रोकायासँग हिमचिम बढेको र उनलाई लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बारे पारसले प्रश्न गरे, म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा ला’ज मान्नुपर्ने’ ? आफू राजा हुनका लागि नजन्मिएको र राजसी ठाँटको मान्छे पनि नभएको पारसको प्रतिक्रिया थियो। मोटरसाइकलमा हिँड्दा स्वतन्त्र हुन्छु, त्यसैमा हिँड्छु’ खबरहबसँगको कुराकानीमा पारसले भने, म साधुको जस्तो जीवनशैली बिताउँन चाहान्छु।
निर्मल निवासमा पारस शाहलाई प्रवेश नि’षेध रहेको विषयसमेत चर्चामा रहेको बेला पारसले आफू निर्मल निवासमा नभई छुट्टै अपार्टमेन्टमा बसिरहेको स्वीकार गरे। उनले भने, धन सम्पत्तिको नाममा मसँग एउटा मोटरसाइकल, गाडी र अपार्टमेन्ट मात्र रहेको छ। पारसले आफूमा सत्ताको ला’लसा नभएको दा’बी गरे। आफूलाई सत्तामा जाने, शक्ति हासिल गर्ने र राजा हुने आशक्ति नभएको भन्दै पारसले भने, म राजा हुने आशक्तिको मान्छे होइन, ज्ञानी र ध्यानी हुन्छु, अध्ययनमै समय बिताउँछु।
करिश्मा मानन्धरको उमेर पचपन, पहिरन बचपन
सुत्ने बेलामा सुपा देउरालीको दर्शन गरि पुरा पढेर सुत्नु होला ! हर मनोकामना पुरा होस्
बिहे गरेको २ वर्षमा नै विधवा बनेकी अभिनेत्री मेघ्नाको यस्तो मन छुने भावुक स्टाटस
ऐश्वर्यले नयाँ फर्निचरहरू किन्न सुझाव दिँदा राजा बिरेन्द्रले भने, ‘जनताले दुःख गरेर तिरेको करबाट यी फर्निचर किनिएका हुन्, पुराना सोफाका कपडा फेरेर मरम्मत गरे हुन्छ, नयाँ किन्नुपर्दैन ।’
४० डाकासँग एक्लै लडेर नारीको ईज्जत जोगाउने एक (नेपाली) गोर्खाली